''ငါ ဆုရရမယ် ဆိုတာထက် ငါစင်ပေါ်မှာ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ချပြမယ်ဆိ?? - Yangon Media Group
အလှမယ် သိမ့်သဉ္ဇာ။(ဓာတ်ပုံ-Miss Tourism Worldwide)
စက်တင်ဘာ ၉ ရက်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာပြုလုပ်မယ့် Miss Tourism World wide 2018 ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၅ဝ ကျော်က အလှမယ်တွေနဲ့အတူ မြန်မာကိုယ်စားပြုအဖြစ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် အလှမယ် သိမ့်သဉ္ဇာနှင့်တွေ့ဆုံခိုက် မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ရာ . .။
မေး – အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ဘယ်နေ့သွားပြိုင်ရမလဲဆိုတာ အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – ညီမနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကိုသွားပြိုင်ရမှာ ဒီပွဲက ပထမဆုံး ဖြစ်ပါ တယ်။ အရင်ကတော့ ပြည်တွင်းက ပွဲအသေးလေးတွေပဲ ပြိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခက်အခဲတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်မှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာ နိုင်ငံ ပေါင်း ၅ဝ ကျော်တို့နဲ့အတူတူ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေဆိုရင်ရော ဘာတွေလုပ်ဆောင်ထားလဲ။
ဖြေ- ဆရာတွေကလည်းတော်တော်လေးကို သင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြင်ဆင်မှုတွေ တော်တော်လေးကို လုပ်ထားပါတယ်။ အဓိက လုပ်တာကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ပိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်က မိသားစုတွေကလည်း တော် တော်လေးကို ပံ့ပိုးပေးကြပါတယ်။ ပြင်ဆင်ချိန်ကတော့ အများကြီး တော့ မရလိုက်ပါဘူး။ အခုပြိုင်ရမှာကတော့ Toursim နဲ့ပတ်သက် ပြီးပြိုင်ရမှာဆိုတော့ Toursim ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြင်ဆင်တယ်။ နောက် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်ပါတယ်။
မေး- အသက်ကရော ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ အနုပညာနဲ့ ပညာရေးကို ဘယ်လိုခွဲခြားလုပ်ကိုင်ဖြစ်လဲ။
ဖြေ- အသက်ကတော့ ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးပိုင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဝါသနာပါတဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကို အချိန်တွေ ခွဲပြီးလုပ်ရတာ တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ အခုကလည်း ကျောင်းတက်နေတာဆိုတော့ ကျောင်းဘက်ကိုရော အနုပညာဘက်ကိုရော မျှအောင်လုပ်ရပါတယ်။ များသော အားဖြင့်တော့ ကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ပိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ကျောင်းပိတ်တာကြောင့် ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးဘက်ကိုလည်း သေချာလုပ်ရပါတယ်။
မေး- အခုပြိုင်ပွဲမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ- ညီမ အခုပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရခြင်း မရခြင်းထက် ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လို အကောင်းဆုံးလုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုပဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ငါ ဆုရရမယ်ဆိုတာထက် ငါစင်ပေါ်မှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးချပြမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ရင် ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုကိုရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး- အနုပညာအလုပ်တွေကိုရော ရှေ့ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာလား။
ဖြေ- ညီမ အနုပညာကိုငယ်ငယ်ကတည်းက ဝါသနာပါပါတယ်။ ညီမ ဒီ Miss မလုပ်ဖြစ်ခင်ကတည်းက ကျောင်းပိတ်ချိန်တွေမှာ MTV ရိုက်တာတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တာလေး တွေကို ကိုယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ နေရာလေးတွေကနေ တတ်သလောက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ဒီအလုပ်တွေကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုးလုပ်သွားမှာပါ။
''ဇာတ်ကား အေတ်ာတော်များများမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတော့ ပရိသတ် သတိထားမိပြီး အားပေးမှု များလာတာကြောင်?
ဒုတိယအခွင့်အရေး အဖြစ် အာဂျင်တီးနား ယူ – ၂၁ အသင်းကို ဆမ်ပါအိုလီ ကိုင်တွယ်ရမည်
မင်းကွန်းသို့ လည်ပတ်ရန်နှင့် လင်းပိုင်လေ့လာရန် အတွက် မရမ်းခြံဆိပ်ကမ်းသို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသ
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲပိုစတာများ ဖျက်ဆီးခံရဟု ရဲများထံတိုင်ကြား